Na-elekọta callabata ụlọ na obi ụtọ na nka - Nkewa nke rhizome - 2020
Calla bụ ahịhịa na-eto eto nke ezinụlọ. Calla bụ okooko osisi mara mma mara mma ma nwee ọdịdị dị iche. Ogooko osisi Calla nwere ike iche iche dị iche iche, nke na-eme ka ndị mara ubi mara ya.
Ebe maka ite nke calla
Ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ
Atụmatụ nlekọta Calla n'ụlọ
Ịgbara na iru mmiri
Calla na-elekọta n'oge oge ezumike
Mgbanwe transplanting kwesịrị ekwesị na ala maka calla
Esi zụọ calla
Ọnọdụ kachasị maka callas
N'agbanyeghi na calla abiala anyi site na South Afrika nke di na ebe obibi ebe okpomọkụ, o bu ihe siri ike na osisi di egwu. Oge calla okooko na-esi na izu atọ na asatọ.
Mgbe ị na-ahọrọ saịtị maka mkpịsị osisi calla, tụlee ihe abụọ dị mkpa:
Calla dị ezigbo mkpa maka ọkụ;
E nwere ụdị ndị nwere okpomọkụ.
Callas na-eto nke ọma na ndo nke anya - n'okpuru ndu nke ìhè anyanwụ. N'oge okpomọkụ, ọ bụ ihe na-achọsi ike ka ifuru ahụ dị nso na windo ahụ, ma na nzuzo. N'oge oyi, osisi ndị ahụ enweghị ìhè anyanwụ. Ma ọkụ ọkụ dị mma dị ezigbo mkpa maka ọganihu nke calla. Mgbe enweghi ìhè, chala chara nwere ike ịkwụsị ịmị mkpụrụ, naanị na-eto eto. Ụdị ndị nwere àgwà dị ala n'ọnọdụ dị ala na-efunahụ ndò ha mara mma. Maka e guzobere ị ga-esi na okooko osisi ndị a, a chọrọ ìhè anyanwụ maka awa 12 n'ụbọchị. N'ehihie, mgbe okookochara - ìhè kwesịrị ịbụ ihe na-erughị asatọ ma ọ bụghị ihe karịrị awa iri.
Ị ma?Ụdị callas na mpaghara ha niile bụ nsi. Ya mere, gbalịa igbochi ifuru na ụmụ na anụmanụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ na osisi, echefula ịbịakwa uwe mkpuchi.
Echefula na ebe obibi calla na-emekarị bụ oké okpomọkụ na oke iru mmiri. Ya mere, callas chọrọ nlekọta yiri nke a n'ụlọ. Igwe achọrọ achọta n'ime ụlọ ebe nchekwa na-adabere na oge. Ọnọdụ kacha mma dị na 15 ruo 25 Celsius C (n'oge okpomọkụ nke 22-25, n'oge oyi nke ogo 15-18). Mberede ụda mmiri na-adaba na-ebibi ihe niile ụdị callas na-eme ka ọ ghara ịkụda okooko osisi. Na ihu igwe dị ọkụ, ọdịbendị na-achọ iji mmiri na mmiri ọkụ na-emekarị. Debe osisi na mbara ihu ahụ naanị na ihu igwe ọkụ. N'oge oyi, calla kwesịrị ịdị na-ekpo ọkụ n'ọnụ ụlọ.
Dị ka ọkachamara si kwuo, callas na pots bụ unpretentious na ha cultivation anaghị achọ ihe ọ bụla pụrụ iche usoro. Isi ihe bụ ịmepụta ọnọdụ kachasị mma ma soro iwu ndị dị mkpa maka nlekọta.
Otu n'ime isi nke nlekọta nke callae n'ime ite bụ ịsa mmiri kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na a naghị edozi osisi ahụ mgbe niile, ọ ga-akwụsị na-eto eto. Mmiri mmiri na mmiri a na-eme mgbe niile na okooko osisi ndị a na-ahụ nke ọma. Nke a dị ezigbo mkpa mgbe ị na-eto eto chara acha ọcha. Callas na-acha edo edo adịghị otú ahụ na mmiri. Otutu mmiri na-adabere n'oge uto. Ihe bụ isi bụ na ala n'ime ite adịghị anọgide na-akọrọ. Ikuku n'ime ụlọ ebe callae na-edebe ga-adị iche na oke iru mmiri.. Ezigbo mmiri maka calla bụ 70-80%. N'ezie, nke a siri ike ime. Ya mere, ọ dị mkpa ịmegharị mmiri calla ugboro ugboro (ugboro abụọ n'ụbọchị). Gbalịa ehichapụ akwụkwọ ndị ahụ na akwa ákwà.
Ka calla na-etolite, mgbọrọgwụ nke osisi ahụ jupụtara ite ahụ ma gbanye ngwa ngwa niile uru ndị dị na ala. Na ọdịnaya mgbe nile nke ịbanye n'ime ite ahụ chọrọ nri oge na mgbagwoju fatịlaịza. Ọ dị mkpa maka mmepe kwesịrị ekwesị nke calla.
Ọ dị mkpa! Cheta otu iwu dị mkpa nke na-eto eto lilie calla: obere osisi ahụ na-enweta ìhè anyanwụ na okpomọkụ, ọ ka mkpa maka fertilizing na fatịlaịza.
Nri Na-eme nri site na nri fatịlaịza zuru ụwa ọnụ ma na-eji kwa ụbọchị 10-14. A naghị atụ aro ka itinye nitrogen nri tupu okooko. A ghaghị ịkụzi osisi ahụ na urea ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ nsị nke egg egg. Usoro e mere na oge nke calla. Mgbe ị na-etinye fatịlaịza, ị ga-akpachara anya - ị nwere ike ịfefe oku, ka osisi gị wee nwụọ. Mgbaàmà nke oke ụba fatịlaịza na-acha odo odo na ahihia. Tụkwasị na nke ahụ, site na mmanụ na-esi na ya pụta, osisi ahụ ga-ebuwanye ibu na-eto eto, nke na-emetụta ọkpụkpụ.
Ị ma? Site na ụkọ nitrogen, akụkụ calla na-aghọ nke wilted, na-egbuke egbuke, kwụsịrị uto. Na enweghi nke potassium epupụta, ezighi ezi, ebili.
Ozugbo ịzụrụ callas ụlọ, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọta oge izu ike maka osisi ahụ. Ọtụtụ mgbe, oge callas "oge ụra" malitere n'October - Nọvemba, njedebe ga-ada na February - March. Emela "tinye" callae n'oge izu ike n'oge na-adịghị anya. A naghị atụ aro ya ka ị kwụsị ma ọ bụ belata akwụkwọ. Na nke a, ndị tubers adịghị enwe oge iji chachaa n'onwe ha. Calla nwere oge nke abụọ ruo ọnwa isii.
Ilekọta calla n'oge oge ezumike gụnyere: ịtọ ọnọdụ okpomọkụ a chọrọ, ezigbo mmiri mmiri, ọkụ, iru mmiri na fertilizing. Ihe niile a na-enyere osisi ahụ aka ka ha zuo ike mgbe ọ gbasara ogologo oge. Nkịtị na-acha nwayọọ nwayọọ n'oge oyi. Ha na-etolite na oyi na mmiri, na-ezu ike na ụbọchị okpomọkụ. Ma ndị callas na-acha ọcha na-akwụsịkwa ibu ha, hapụ akwụkwọ ha na hibernate (rue March-April). Ọ bụ ya mere na ọfịs, ụlọ na ụlọ anyị na-ahụkarị callas nke agba ọcha.
Ejila osisi transplant na-adịghị ike ma ọ bụ mebie Ome. Iji mee ngwa ngwa ka calla banye na gburugburu ebe obibi, ọ dị mma ka ị jiri ụwa nkịtị ma ọ bụ ihe mejupụtara na nso nke okike. Tupu ịghagharị, kpọọ mgbọrọgwụ. A ghaghị ime nke a na ịkpachara anya dị oke egwu. Emebila mgbọrọgwụ, ka ị ghara ịmepụta nje bacteria ọhụrụ n'ime ọnya ahụ. N'ihi ya, a ga-emerụ ala ọhụrụ ahụ.
Ọ dị mkpa! Iji belata ihe ize ndụ nke rotting mgbọrọgwụ, tupu transplanting ọhụrụ tubers kwesịrị tinye na a na-adịghị ike ngwọta nke potassium permanganate (potassium permanganate). Mgbe usoro a gasịrị, enwere ntụpọ niile. Ọ bụrụ na e nwere growths ma ọ bụ ire ọkụ, ị nwere ike ihicha mgbọrọgwụ na mma na disinfect agba aja aja.
Ọtụtụ ndị nwe omenala a na-echekarị: esi enweta mmiri calla mgbe transplantation gasịrị. Ebe ọ bụ na calla chọrọ mmiri buru ibu, a ghaghị ịme mmiri na-epupụta mgbe niile. N'ezie, echela ya na nke a. Ekwesiri iburu n'uche na acidity choro nke ala (pH) agagh adi elu kari 6. Ala ala ga - agụnye ihe ndị a:
ájá (otu ibe);
peat (otu akụkụ);
akwukwo humus (otu akụkụ);
sod ala (abụọ akụkụ).
A na-agbasala callae ụlọ na ụzọ abụọ: nkewa rhizomes na osisi. Usoro nke abuo bu ihe mgbagwoju anya na ogologo, ya mere enweghi ike iji ya.
Nkewa nke rhizomes bụ ụzọ kasị mma na nke kachasị na-azụ calla. A na-emekarị nkewa na ọdịda. Tubers ga-esi ike ma dị mma. Ya mere, na spatula ma ọ bụ mma dị nkọ, ị ga - eji nlezianya kewaa isi ihe dị n'ime akụkụ. Ọ dị mkpa ịkekọrịta n'ụzọ dị otú ahụ na nke ọ bụla nwere mgbọrọgwụ na ụwa zuru ezu. Onye ọ bụla nke kewara ekem ka ọ kụrụ n'ubi dị iche iche.
Ghaa na ala mmiri na omimi nke ihe dị ka centimita 5-8. Ebe ọ bụ na a kụrụ akuku na ndagwurugwu, osisi ọhụrụ hibernate na ọkara-ihi ụra. Na mmalite, callas adịghị mkpa ịgbara. Ma mgbe izu mbụ gasị, jide n'aka na ala anaghị akpọnwụ; jiri nwayọọ nwayọọ na-amụba ma na-agbazi oge. Na-ele anya na ọkụ maka ọhụrụ calla mgbọrọgwụ. A ghaghị ichebebebebe site na anyanwụ na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke.
E nwekwara ike imepụta mkpụrụ osisi calla. A na-ele usoro a anya dị ka ihe a na-apụghị ịdabere na ya, ebe ọ bụ na ihe ga-esi na ya pụta ga-echere ogologo oge. Tụkwasị na nke a, usoro a anaghị ekwe nkwa mmepụta nke ọma. Ma ị gaghị enwe ike ijide n'aka ihe ga-esi na ya pụta. Otú ọ dị, ịmụba mkpụrụ osisi calla na osisi, ị ga-enwe mmetụta dịka ezigbo onye na-azụlite. Ọ bụrụ na ị nwee obi ụtọ, ị nwere ike ịchọta ụdị nke calla nke ga-oge ntoju na windill windows gị.
Ọ bụrụ na ị kpebiri ịkụ mkpụrụ osisi calla na-eto eto, gbanye ha ruo awa ise na ngwọta nke potassium humate. Nke a bụ usoro dị mkpa, dịka osisi calla nwere obere mkpụrụ ndụ na ndụ dị mkpirikpi. Na-esote, dozie ihe ọ bụla akpa ma ọ bụ guzoro. Na-ekpuchi akpa ya na akwa akwa ma ọ bụ akwa akwa, gbasaa mkpụrụ ma kpuchie ya na ákwà akwa ọzọ. Tinye mkpụrụ osisi n'ime ebe ọkụ maka 6-8 ụbọchị ma ghara ikwe ka ihicha.
Ọ dị mkpa! Nhiehie nke ọtụtụ ndị na-eto eto na-acha ọkụkụ bụ na ha na-etinye mkpụrụ osisi ozugbo n'ala, ebe ọtụtụ n'ime ha, ala, anwụ. A na-akụ mkpụrụ osisi kachasị mma na arịa ndị dị na ala ma jide ha n'ebe dị ọkụ ruo mgbe germination. Ọ bụ nanị mgbe a ga-akụ ala a n'ala.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ilekọta callae na ite anaghị achọ mgbalị dị ukwuu. Ihe kachasị mkpa bụ ịgbaso iwu niile dị n'elu ma jiri nlezianya nọgide na-enwe ịdị elu nke ikuku na ala. N'ihi ya, ị ga-enweta nnukwu okooko nke osisi a dị ịtụnanya nke ga-atọ onye ọ bụla ụtọ.
Green rose - ụdị dịgasị iche iche, nke bụ
Onye njem si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ - osisi ahịhịa maka ogige oghe Verbena nke ọma na-agbasa
Rose Charlotte (Charlotte) - nkọwa dị iche iche
Na-azụ anụ ọkụkọ n'oge oyi maka mmepụta anụ
Stonecrop ma ọ bụ sedum: nkọwa, ọdịda, nlekọta
Atọ atọ nke mma na obi iru ala - Tsarskoye Selo hens
Gịnị bụ dahlias: nhazi na ihe atụ nke iche iche iche
Ntuziaka nlekọta Cheflera kacha elu